Saaxiibkayga oo jira (15) iyo aniga oo jira (15) aad ayaynu isku jecelnahay. Wuxuuna doonayaa in uu galmo ila sameeyo. Ma ku khasbanahay in aan galmo la sameeyo si uusan iiga tagin? – Tips for refugees
Saaxiibkayga oo jira (15) iyo aniga oo jira (15) aad ayaynu isku jecelnahay. Wuxuuna doonayaa in uu galmo ila sameeyo. Ma ku khasbanahay in aan galmo la sameeyo si uusan iiga tagin?
Waa arin wanaagsan in labadiinuba aad isjeceshihiin.
Haddaba saaxiibkaaga wuxuu doonayaa in uu galmo kula sameeyo.
Wuu jeclaan karaa in uu jirkaaga taa-taabto oona sidaasi adiga iskula kacsataan ama raaxaysataan.
Taasi dhib malahan.
Laakiin adiga ma doonaysid.
Taasi gebi ahaabna waa mid caadi ah.
Labbo qof oo isjeceyl ma ahan in ay marwalba hal shay isla wada jecelyihiin.
U sheeg in aad jeceshahay.
Laakiin aadan doonaynin in aad galmo la samaysid.
Waxaa dhici karta in uu muraal jabo una maleeyo in aadan jeclayn asaga.
Si cad ugu sheeg in aad weli u baahantahay wakhti dheeri ah kahor inta aadan samaynin galmada.
Galmadu waxay macaantahay marka ay labbada qofba wada doonayaan.
Laakiin ma wanaagsana in galmada loo sameeyo kaliya in uu qofka kale doonayo.
Waxaa dhici karta in uu sugo illaa aad adiguna sidoo kale ka doonaysid in aad galmo samaysid.
Waxaa dhici karta in uu isku dayo in uu ku qanciyo oona arinta kaa dhaadhiciyo.
Waxaa kaloo dhici karta in uuba kaa tago.
Laakiin galmadu ma ahan mid dammaana qaadaysa in uu weligiisa kula joogayo.
Sidaas darteeda waa muhiim in aad NAFSADAADA ka taxadirtid.
Waa muhiim in aad oggaatid waxa AAD doonaysid iyo waxa ADIGA kuu fiican.
Previous Previous post: Waxaan helay boggaan internetka ah. Waxaana jeclahay in aan oggaado dadka iiga jawaabaya su’aalahayga. Yaad tihiin idinka?
Next Next post: Waxaan ahay gabar jirta-17-sanno. Waxaan jeclahay in aan guursado saaxiibkayga. Ma tahay midaasi mid laga oggolyahay dalka Jarmal?